धादिङमा आपसी झ’गडापछि ह’त्या ! ह’त्यापछि टाउको लिएर प्रहरीमा
धादिङमा गएराती एक जनाको ह’त्या भएको छ । ह’त्या हुनेमा निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १३ भोर्लेका अन्दाजी ६४ वर्षीय सोम गुरुङ्ग रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार आपसी झ’गडामा स्थानीय २६ वर्षीय राजु परियारले धा’रिलो ह’तियार (खुर्पा) ले गुरुङ्गको ह’त्या गरेका हुन् ।
ह’त्यापछि मृतक गुरुङ्गको टा’उको र खुर्पा समेत लिएर परियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा आ’त्म स’मर्पण गरेको प्रहरीले बताएको छ । धादिङमा ह’त्या गरी मृ’तकको टाउको र खुर्पा सहित प्रहरी समक्ष आत्म समर्पण गरेको पहिलो घ’टना हो ।
गम्भीर खालको घ’टना भएकोले थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घ’टनाबारे थप अनुसन्धान एवं श’व पो’स्टमा’र्टमको काम भैरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् ।
विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, “अहिले विभाग पनि पूर्ण आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?” तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । ” करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् ।